Mheni-Jack adapta iyo inosvika neiyo iPhone 7 | IPhone nhau
Iyi ndiyo yemagetsi -Jack adapta inosvika neiyo iPhone 7?
Iyo inotevera iPhone, ingangodaidzwa kunzi iPhone 7 kana, sekureva kwerunyerekupe rwazvino, iPhone 6SE, ichave inonyanya kunetsa apple apple kubvira payakatangwa muna 2007. Ichave nekuti dhizaini yayo ichave, yegore rechitatu rakateedzana, senge yeiyo iPhone 6, asi chakanyanya kushoropodzwa nevashandisi vazhinji ndiko kusavapo kwe3.5mm headphone port. Kuti uteerere kumimhanzi pane inotevera iPhone iwe unozoda Bluetooth headset, mahedhifoni ane Mheni yekubatanidza kana, kubva pane ino posvo iri, a Lignthing-Jack adapta.
Mazhinji runyerekupe uye vaongorori vanoti iyo Mheni-Jack adapteri ichaverengerwa muiyo iPhone 7 bhokisi/ 6SE. Asi iyo adapta yakagadzirirwa Apple ingaite sei? Zvakanaka tinhte.vn anodaro, uye yakaburitswa mumifananidzo inotevera, kuti Apple's Lightning-Jack adapta ichave netambo diki uye, kumagumo ayo maviri, murume Mheni uye mukadzi 3.5mm jack. Zvingave sei kuti zvimwe zvinouya kubva kuApple, iyo adapta yese chena.
Inogona kuitika Apple Mheni-Jack adapter
Iyo adapta iyo inotiratidza iyo Vietnamese nharaunda inotaridzika zvakanyanya sezvimwe zvishongedzo izvo zvatinoona mune chero Apple Chitoro, asi zvinogona kunge zviri zvekunyepa. Chii chakabata pfungwa yangu zvakanyanya yaive inotevera mufananidzo:
Ndakagara ndichifunga kuti Apple inogadzira kuburitsa kwese. Kana ndiri chokwadi uye Apple inodzora ruzivo rwese rwunouya kwatiri nguva isati yakwana, ndeapi madonhwe emvura ari kuita mumufananidzo uri pamusoro? Zvanga zvakaoma here kuti zviome usati watora pikicha? Iwo madonhwe emvura anogona kuve mucherechedzo uyo ichave iyo iPhone 7 ichave isina mvura zviri pamutemo.
Hapana chimwe cheizvi chinowanikwa mumifananidzo iyi, asi isu zvakare tinofanirwa kutaura nezve dambudziko rekuchaja iPhone uchiteerera kumimhanzi. Ini pachangu handinganzwisise kuti isu hatigone kuzviita zvese panguva imwe chete, kana kwete pasina kutenga imwe adapta kana Doko. Tichaona izvo zvavanotipa kwatiri munaGunyana, asi hazvingave zvakanaka here kana vakatipa iyo chaiyo isina waya yekuchaja iyo imwe runyerekupe inotaura nezvayo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyi ndiyo yemagetsi -Jack adapta inosvika neiyo iPhone 7?
Ndanga ndiine iPhone 5S kwemakore akati wandei uye zviri kundifambira, saka handina chinangwa chekumutsidzira iyo iPhone 7. Iyo "nyowani" iPhone SE inokwezva kutarisisa kwekuita-mutengo.
Tichafanirwa kuona nhau dzinounzwa neinotevera iPhone, asi ndiri pachena kuti handisi kuzoshandisa mafuro eiyo iPhone ine dhizaini yakafanana kune iyo 6S uye kunyange zvishoma kana zvichisimbiswa kuti maheti ari kuenda kubatana neadapter kune chiteshi chemheni.
Izvo kunze kwekunge ivo vanosanganisira iyo itsva iyo iyo inoenda isina tambo dzinoenderana ne USB. Kwandiri, hachisi chikonzero chekuvandudzwa, bhatiri rakati kurei, kamera iri nani, yakawanda ndangariro, kugona, processor, nezvimwe. Sezvo sekutaura kwandakaita, yangu 5S iri kubhururuka izvozvi uye iine makore matatu ekuberekwa.
Ndinovimba ndakakanganisa uye munaGunyana vanopa iPhone nyowani yakasiyana neiyo isu yatinotarisira, asi runyerekupe rwekutsiva rehash ye6
Ngatione pakupedzisira chinhu ...
Pindura kuna Odalie
Iyo itsva Apple patent inotiratidza iyo iPhone ine dijitari korona seApple Watch
Yangu Vodafone inogadziridzwa new design